अब सेयर धितो राख्न ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > अब सेयर धितो राख्न ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने !
काठमाण्डौं । अबदेखि संस्थापक सेयर धितोमा राख्दा लगानीकर्ताले सम्बन्धित सेयर रहेको कम्पनीबाट पाउने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ निक्षेप संग्रहकर्ता(डीपी) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड(सीडीएससी) पनि पेश गर्नु पर्ने भएकोछ ।
नियामक निकाय नभएका संस्थाका संस्थापकले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पेश नगरेको भन्दै सीडीएससीले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । डिम्याटमा रहेको सेयर धितोमा राख्दा खातामा नै ‘प्लेज्ड’ (कर्जा भुक्तानी नहुँदासम्म किनबेच गर्न नसकिने गरि खातामा रोक्का) हुन्छ ।
कागजी सेयर डिम्याट नगरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, बैंकमा धितोमा रहेको कागजी सेयर समेत डिम्याट गर्न सकिन्छ । तर यसको लागि धितो लिने संस्थाबाट स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै लगानीकर्ताले सम्बन्धित सेयर जारी गर्ने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पनि लिनु पर्छ ।
२१ भदौ २०७३, १०.३०
२०७३ भदौ २१ गते ११:५३ मा प्रकाशित
म्यानपावर कम्पनीले अब जिल्ला जिल्लामा शाखा खोल्न पाउने !
घुस लिने दिने वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत र शिक्षक घुससहित पक्राउ
हेर्नुहोस् ! यस्ता छन समृद्ध नेपाल बनाउन ‘सी’ले गरेका सात प्रतिवद्धता